News - waa maxay isha hoosku
Daawaynta baarkinka N
Waxyaabaha Daryeelka Ragga
waa maxay isha hoosku
Hooska indhuhu waa wax la isku qurxiyo oo lagu mariyo baalasha indhaha iyo sunnayaasha hoostooda. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in indhaha qofka xiran uu ka soo muuqdo ama u ekaado mid soo jiidasho leh.
Hooska indhuhu wuxuu qofka ku daraa qoto dheer iyo cabbir, wuxuu buuxiyaa midabka indhaha, ama wuxuu si fudud indhaha ugu jeediyaa indhaha. Hooska indhuhu wuxuu ku yimaadaa midabbo badan iyo qaabab kala duwan. Badanaa waxaa laga sameeyaa budada iyo mica, laakiin sidoo kale waxaa laga heli karaa dareeraha, qalinka, ama qaabka mousse-ka .Xasaasiyadaha adduunka oo dhan waxay isticmaalaan hooska indhaha - badanaa dumarka, laakiin mararka qaarkood ragga.
Bulshada reer Galbeedka, waxaa loo arkaa inay tahay isku qurxin dhedig, xitaa marka ragga adeegsadaan. Celcelis ahaan, masaafada u dhexeysa baarkooda iyo sunnayaasha waxay labo jeer ka weyn yihiin dumarka sida ragga. Sidaas awgeed hooska indhaha oo cirro leh ayaa muuqaal ahaan ballaarinaya aaggan oo leh saameyn haween ah. Qaab dhismeedka Gothic, hooska madow ee madow ama mid la mid ah iyo noocyada kale ee qurxinta indhaha ayaa caan ku ah labada jinsi.
Dad badan ayaa adeegsada hooska indhaha si fudud si ay u horumariyaan muuqaalkooda, laakiin sidoo kale waxaa badanaa loo isticmaalaa tiyaatarka iyo riwaayadaha kale, si loo abuuro muuqaal xusuus leh, oo leh midabbo dhalaalaya oo xitaa qosol leh.
Waxay kuxirantahay maqaarka midabkiisa iyo waaya aragnimadiisa, saameynta hooska isha badanaa waxay soo saartaa soo jiidasho waxayna yeelataa feejignaan Adeegsiga hooska isha ayaa iskudayaya inuu soo rogo hooska indhaha ee dabiiciga ah ee dumarka qaar soo bandhigaan sababo la xiriira midab kala duwanaansho dabiici ah oo ku dhaca indhahooda. Hooska indhaha ee dabiiciga ahi wuxuu u dhexeeyaa meel kasta oo ka yimaada dhalaalka dhalaalaya illaa mid indhaha ah, midab casaan leh, ama xitaa muuqaal lacag ah.
Waqtiga boostada: Mar-08-2021
Kusoo Biir Wargeyskeena:
na soo booqo
B566, Zone B, Liwan Plaza, No.9 Dexing Road, Guangzhou Shiinaha